Miyaa la cayrin doonaa macallin Zinedine Zidane haddii caawa ay Real Madrid guuldarro kala kulanto Galatasaray? – Gool FM
Miyaa la cayrin doonaa macallin Zinedine Zidane haddii caawa ay Real Madrid guuldarro kala kulanto Galatasaray?
(Istanbul) 22 Okt 2019. Sida wararku ay sheegayaan macallin Zinedine Zidane ayaa shaqada laga cayrin doonaa haddii kooxdiisa Real Madrid ay caawa guuldarro kala kulanto naadiga Galatasaray.
Jariiradda Marca ee ka soo baxda dalka Spain ayaa warinaysa in Tababare Zinedine Zidane la cayrin doono haddii Real Madrid ay guuldarro kala soo kulanto naadiga Galatasaray oo ay caawa ku booqanayso Turkiga kulan ka tirsan heerka Guruubyada Champions League.
Los Blancos ayaa qaab ciyaareed niyad-jab leh ku bilaabatay xilli ciyaareedkan, inkastoo ay fadhiyaan kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka La Ligaha Spain.
Rajada ay ka qabaan Real Madrid inay ku guuleystaan Koobka Horyaallada Yurub ayaa noqon doonta mid daciif ah haddii laga badiyo kulanka caawa ka dhacaya dalka Turkiga.
Waxaana sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha Spain la cayrin doonaa tababaraha reer France ee Zinedine Zidane haddii Los Blancos ay khasaaro ka soo gaarto caawa naadiga Galatasaray.
Macallimiin dhowr ah ayaa la la xiriirinayaa shaqada kooxda Real Madrid si ay bedel ugu noqdaan Zidane, waxaana Tababarayaashaas horkacaya macallinkii hore ee kooxaha Chelsea iyo Manchester United ee Jose Mourinho.
Daafacii hore ee Man United, Patrice Evra oo laacib ka tirsan Kooxda Liverpool ku tilmaamay xiddigii ugu adkaa ee uu ka horyimid
Pochettino, Ferguson, Giroud, Eriksen, Abraham, Fred iyo Waxyaabihii ay Wargeysyadu saakay ka qoreen suuqa kala iibsiga ciyaartoyda